सपनामा झगडा गरेको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
ramkrishna April 12, 2021	सपनामा झगडा गरेको देख्नु
सुतेपछि सपना देख्नु स्वभावीक हो । हामीले पनि देखिएका केही सपनाहरु शुभ हुन्छन भने केही सपनाहरुलाई शास्त्रले नै अशुभ मानेको छ ।
मत्स्य पुराणको २४२ औँ अध्यायमा सत्ययुगमा भगवान विष्णुले मत्स्य अवतार लिएका थिए त्यतिबेला महाराज मनुले शुभ सपनाको फल बारे बताउन आग्रह गरेका थिए । विष्णुले सूर्योदयमा देखेका केही सपनाहरु शुभ रहने बताएका थिए ।
सपनामा झगडा गरेको देख्नु : सपनामा लडाई गरेको युद्ध गरेको देख्नुलाई पनि शुभ मानिन्छ । साथै वादविवादमा विजय हासिल गरेको देखेमा, काच्चो मासु खाएको देखेमा, रगत वा रगते नुहाएको देखेमा राम्रो मानिन्छ । जुन सपना देखेको १० दिनमा नै फल प्राप्त हुन्छ । दुध पिएको देख्नु सपनामा दुध पिएको देख्नुलाई शुभ मानिन्छ ।
Previous Previous post: सपनामा कुकुर देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा बिबाह गरेको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्